China Hermetically Chisimbiso Tea uye Coffee Tin magaba fekitari uye vagadziri | Byland
Byland Inogona kugadzira chero chimiro chesimbi tini mari yebhangi. Tsika yemari bhangi inotorwa zvakanyanya uye inoshongedza dzimba zhinji. Ivo vanowedzera kunakidza uye kufarira kumahofisi, mabhawa uye magaraji. Metal scion bank inoshandiswa sezvipo, zvine hungwaru kutaura uye kushambadzira kwe retro. Munguva yekuderera kwehupfumi, tini yemari yebhangi yaive ichiri kutengesa yakasimba. Icho chipo chisina kujairika, chitsva chipo kana kuunganidzwa pasina hombe yemutengo. Zvigadzirwa zvedu ndezvemhando yepamusoro uye yedu yepamusoro-tsananguro yekudhinda inounza padhuze-yemhando yepamusoro.
Hermetic tii uye kofi magaba haana kufananidzwa musherefu kugadzikana nekuda kwechimiro chehemmetic chinodzivirira iyo tii nekofi kubva mumhepo, mwenje, hunyoro, uye kunze kwekusvibisa. Tine mashoma ekupedzisira sarudzo dziripo dzinosanganisira EZO Ends, Peel Off Ends, Peel Off neValve Ends, uye yekushongedza simbi snap mabutiro. Izvo zvinofukidza zvivharo zvinogona kuve tsika yakadhindwa uye yakashongedzwa.
100% Inogadziriswazve Kofi uye Tea Packaging
Isu tinonzwisisa zvaunoda zvekunyatso gadzirwa, wakasungwa-nemhepo kofi package iyo isingape zvikonzero kana zvasvika pakuchengetedza. Chinhu chikuru chakanakira kuti kurongedza simbi hakugone kugadziriswazve. Simbi yakasarudzika nekuti inogona kudzokororwazve kakawanda pasina kudzikiswa kwemhando. Inosanganisira hupfumi hwakatenderera sezvo ichienda kubva mukugadzira simbi kuenda mukugadzira kuenda kumutengi kunyorera-mutengi marara.
Kana kani yadzokororwazve, inogona kuve chero chinhu chezvinhu: chikamu chebhiriji, danda rekutsigira, bhasikoro, mugoro wekufamba, nhandare, imwe kofi kiyi, nezvimwe. Kana zvigadzirwa zvesimbi zvikandwa kure, zvinotorwa kubva marara ekurasa marara nemagineti zvobva zvashandiswazve zvakanaka. Nezvikonzero izvi, huwandu hwesimbi hwekudzokorora hwesimbi hwakagara huchibva pa70-90% gore rega rega. Ndiyo # 1 yakanyanya kugadziriswazve zvinhu- kupfuura aluminium, girazi, bepa, uye plastiki zvakasanganiswa!
Simba-resimbi simbi rakatungamira ku25 kusvika ku40% kudzikisa huremu mukati memakumi matatu emakore apfuura, pamwe nekuderera kunoenderana mukubuda uye kushandiswa kwesimba. Kubva 1900, indasitiri yesimbi yepasi rose yakadzorerazve pamusoro pematani emabhiriyoni makumi maviri nemana esimbi. Izvi zvakaderedza kushandiswa kwesimbi nematoni anosvika mabhiriyoni makumi matatu pamwe nekucheka mashandisirwo emarasha nematoni gumi nemashanu. Iyo indasitiri yakaderedzawo zvinoshamisa mashandisiro ayo esimba. Kuburitsa tani imwe yesimbi nhasi kunoda chete 40% yesimba rayakaita muna 1960.
Nekuda kwerunako rwavo nekusimba, matinji anounganidzwa, kuzadzwa, kana kuratidzwa mudzimba nemabhizinesi. Makani ekofi anogona kuchengeta kofi yepasi kana bhinzi kana ivo vanogona kushanduka kuva mapurantita, mapenzura mapenji, machira ewaini, nezvimwe.
Makani ari zana muzana anokwanisa kudzokororwa pasina kurasikirwa kwehunhu. Ivo havafanirwe kupedzisira varara muvhu.
Pashure: Yakasarudzika Simbi Coin Bank - China Mugadziri weMetal mari bhokisi
Zvadaro: Metal Tin Cans-Container yekurongedza Mota Wax nePolish
Metal tinplate bhokisi rekurongedza makuki-Biscu ...
Custom Kudhinda Kisimusi Kushongedza Tin Bhokisi F ...
Mhete-yakadhonzwa gaba rekutakurisa chikafu ...